HAMRAKHABAR | » सशस्त्रको भावी आइजीपी काे हुदै छ? यस्तो छ चलखेल सशस्त्रको भावी आइजीपी काे हुदै छ? यस्तो छ चलखेल – HAMRAKHABAR
सशस्त्रको भावी आइजीपी काे हुदै छ? यस्तो छ चलखेल
एक वर्षअघि नै सशस्त्र प्रहरीका भावी आइजीपीको लेखाजोखा सुरु भएको छ । शैलेन्द्र खनालको अवकाशपछि महानिरीक्षकमा धेरै विकल्प भएकाले अहिलेदेखि नै चलखेल सुरु भएको छ ।स्वभाविक प्रक्रियामा अहिलेका एआईजी पुष्पराम केसी खनालपछि करिब एक महिनाका लागि आइजिपी हुनेछन् । त्यसका लागि सरकारले उनको पदावधि थप्नुपर्ने हुन्छ । आगामी बैशाखमा एआइजी केसी र रामशरण पौडेलको चार वर्ष पदावधि पुरा हुन्छ । सशस्त्रमा एआइजी र डिआइजीको पदावधि चार वर्ष हुने र त्यसमा महानिरीक्षकको सिफारिसमा सरकारले एक वर्ष थप्न सक्ने उल्लेख छ । हालका दुवै एआइजीको महानिरीक्षक खनालसँग सुमधुर सम्बन्ध छैन । तर, सामान्यतया सबैको एक वर्ष पदावधि थप हुने गरेको नजिर छ । त्यस आधारमा दुवै एआइजीको पदावधि थप हुने सम्भावना छ ।
हालका महानिरीक्षक खनालको अवकाशपछि दुई एआइजी पद रिक्त हुनेछन् । त्यसमा बढुवाका जसले बाजी मार्छ, उही महानिरीक्षक हुने सम्भावना छ । बरिष्ठताका आधारमा प्रवीण श्रेष्ठ र खड्ग राई त्यसका दाबेदार हुन् । श्रेष्ठ पटक पटक भारतीय दूतावास छिरेका कारण कारबाहीमा परेका अधिकृत हुन् । राई कार्यक्षमतामा कमजोर भएपनि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईको सहयोगमा आइजिपी हुने दाउमा लागेका छन् । राईसँग चन्द्रप्रकाश गौतम अवकाश पाउने भएकाले उनलाई रोक्ने रणनीति गौतमको छ